Wepamusoro gumi Wrestler aive mumaOlympics - Wwe
Wepamusoro gumi Wrestler aive mumaOlympics
Mitambo yeWinter Olimpiki yakapera kutanga kwesvondo rino, iyo inoratidza vamwe vevatambi vepamusoro kubva pasirese vachiratidza tarenda ravo rinoshamisa. Kuve weOlympian kubvumidzwa kusingatorerwe kureruka, uye hachisi chinhu chinogona kukwikwidzwa kubva paunotangazve.
Muchokwadi, pakave paine maOlympian mazhinji akasarudza kuita bhizimusi ravo muhunyanzvi hwekurwa - uye WWE kunyanya. Iyo kambani yakagara ichitsvaga vatambi vari kirasi yakaparadzaniswa, uye sezvatinoona vhiki rega rega, ivo havana kutemwa kubva kumucheka mumwechete sevamwe vepasirese.
zvinonakidza zvinhu zvekuita kana ur bored
Sezvo isu tichipemberera maOlimpiki echando a2018, isu tinotarisa kune gumi ekutanga maOlimpiki, ayo akasarudza kuve nyanzvi dzewrestling.
Jumbo Tsuruta naRic Flair
Kana tikadzorera kumashure ese echiJapan emitambo mumakumi matatu emakore apfuura, taizoona zita rimwe chete riine mitambo mishanu-nyeredzi zvinowirirana. Jumbo Tsuruta aive mumwe wevakakurumbira vekuJapan ma wrestling kuti anzwire ringi yekurwa, uye akazosvika mukurumbira mukati menyika.
chii chakaitika kuna lars sullivan
Jumbo paakarwa muUnited States, akawana mukurumbira pamitambo yake yepamusoro muJapan. Nekudaro, asati ave nyanzvi yewrestling, Tsuruta akahwina mukurumbira semutambo weamateur, uye akakwikwidza mumitambo yeOlympics yeChirungu muna1919 muMunich, Germany. Iye mukurumbira wekutsamwa haana kubudirira zvakanyanya, zvisinei, uye akatadza kukunda mukukwikwidza kweGreek - Roma.
Tsuruta akashaya neshungu muna 2000 nekuda kwematambudziko akakonzerwa nekuisirwa itsvo yake, asi achiri kurangarirwa nanhasi nevaJapan vakatendeka.
Ko mr chikara akaiwanepi mari yake
murume achindiramba nekuda kwemumwe mukadzi
sei kutsiva narcissist ex
sei rudo ruchifanira kuoma kudaro
kuva munhu anonakidza wekutaura naye